बिहारको राजधानी पटनाबाट ७५ किलोमिटर टाढा रहेको भोजपुर जिल्लास्थित रतनपुर गाउँ बाँदर आतंकले पीडित छ । यो गाउँ यति कुख्यात भैसकेको छ कि त्यहाँ जन्ती गएमा जिउँदै फर्किने ग्यारेन्टी हुँदैन भन्ने अफवाह चलेको छ ।
जसका कारण उक्त गाउँका कन्याहरुलाई बिहे गर्नका लागि कुनैपनि युवक जन्ती लिएर बेहुलीकोमा जाने आँट गर्दैनन् । बाँदरकै कारण गाउँमा अविवाहित युवतीहरुको संख्या बढिरहेको छ ।
अनेक उपाय गर्दा पनि गाउँबाट बाँदरका बगाललाई हटाउन सकिएको छैन र गाउँलाई पूर्णरुपमा आफ्नो कब्जामा राखेको छ बाँदरले । आसपासका गाउँहरुमा रतनपुर गाउँको बाँदरको कहानी निकै चर्चित बनिरहेको छ । त्यसैले मानिसहरु रतनपुरका केटीहरु मन परेपनि बिहे गर्न जान डराउँछन् ।
बाँदरले आक्रमण गरी मार्छ भन्ने डर छ उनीहरुमा । रतनपुरमा सात वर्षअघि भएको घटनापछि यस्तो भएको रहेछ । एउटा घरमा धुमधामसँग व्याण्ड बाजा सहित बिहे चलिरहेको थियो । जन्तीहरु मज्जाले नाचगान गरिरहेका थिए ।
लागू औषध तस्करी रोक्ने अभियानको विशिष्ट पदमा जागिरखान विज्ञापन गर्दा पनि कोही आएन
बिवाह पछि किन बढ्छ महिलाको हिप ?
जति रक्सी पियो झन् पिउँ पिउँ झैँ किन लाग्छ
युवाहरुमाझ लोकप्रिय रहेको 'भ्यालेन्टाईन्स डे’ बारे १० रहस्य यस्तो
जेफ बेजोस्: अमेजनको मालिकद्वारा पत्रिकाले आफूलाई 'ब्ल्याकमेल' गर्न खोजेको आरोप
किन जापानमा पेन्सनमा बाँच्ने वृद्धवृद्धा जेल जान चाहन्छन् ?
वेलायती राजकुमारीले यौनकर्मीहरुलाई केराको बोक्रामा किन यस्तो लेखेर दिईन !
भेनेजुएलाका १६ राेचक तथ्य : हरेक २१ मिनेटमा हत्या ! मिस वल्र्ड र मिस युनिभर्स ११ जना, २००९ देखि यहाँ कोकाकोला प्रतिबन्धित
भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता सम्पन्न
अध्ययनपछि उसैसँग विवाह हुने निश्चित तर नियमित यौनसम्पर्क र गर्भ रहने डर...